जेलमा के गर्दैछन् ‘हाइप्रोफाइल’ ?
जनक तिमिल्सिना, आश्विन २६, २०७४
पूर्वआईजीपीद्वय ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ डिल्लीबजार कारागारको लाइब्रेरीमा सुत्छन्, मेसमा खाना खान्छन् भने दिनभरजसो चेस खेल्छन् । सुडानकाण्डमा जेलसजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वआईजीपीद्वय राणा र गुरुङका साथै प्रहरीका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू मात्र होइन, देशका विभिन्न जेलमा विभिन्न अपराधकर्मको सजाय भोगिरहेका ‘पूर्व हाइप्रोफाइल’हरूको दैनिकी पनि योभन्दा फरक छैन । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , आश्विन २६, २०७४
सरकारी जागिर खाने चाहना धेरैमा हुन्छ । निजी संघसंस्थामा भन्दा सरकारी रोजगारीमा स्थायित्व, पेन्सन आदि सुविधा हुने भएकाले धेरैको आकर्षण यसमा देखिएको हो । सरकारी रोजगारीमा जान चाहने कतिपय उम्मेदवार लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि अन्तर्वार्तामा असफल हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
कुनै अर्जेन्ट नभएको बेला वा कामको हतार नभएको क्षणले नै मलाई खुसी बनाउँछ । कुनै कुराको प्रेसर तथा जिम्मेवारी नभएको क्षणमा म खुसी हुन्छु । कामको बेला त म खुसी हुनै सक्दिनँ । पुरा पढ्नुहोस्
ठूला कम्पनीका मालिकहरू आफ्ना कर्मचारीबाट सक्दो काम लिन उनीहरूलाई कार्यालय समयमै स्वस्थ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । लन्डनको ह्वाइट कलर फ्याक्ट्री डेभलपमेन्टले १६ तले भवनको छतमा रनिङ ट्रयाक निर्माण गरेको छ । २ सय ३० फिट माथिको उक्त ट्रयाक लन्डनकै अग्लो स्थानमा छ । पुरा पढ्नुहोस्
एजेन्सी, आश्विन २६, २०७४
सैफ अली खान तथा अमृता सिंहकी छोरी सारा अलि खान पनि बलिउड भित्रिएकी छिन् । साराले अभिषेक कपुरको चलचित्र केदारनाथमार्फत बलिउडमा पदार्पण गर्न लागेकी हुन् । उक्त चलचित्रमा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले साराको जोडीका रूपमा अभिनय गरिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, आश्विन २५, २०७४
महिलाको प्रजनन अङ्गका तन्तुमा असामान्य वृद्धि हुन सक्छ । यस्तो वृद्धि डिम्बाशयमा पनि देखा पर्न सक्छ । त्यसैगरी पाठेघरमा पनि यसरी तन्तुको असामान्य वृद्धि हुन सक्छ भने पाठेघरको मुखमा पनि । त्यसैगरी योनि र भग क्षेत्रका तन्तुमा पनि असामान्य वृद्धि देखा पर्न सक्छ । विशेष गरेर योनि र भग क्षेत्रमा हुने मासुको पिण्ड अर्थात् टयुमर विभिन्न किसिमका हुन्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
पवनको फ्लाइ सार्वजनिक
गायक पवन थिङले गाएका सुगम संगीतमा आधारित आधुनिक शैलीका गीतहरुको एल्बम ‘फ्लाइ’ बुधवार काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा विमोचन गरिएको छ । वरिष्ठ संगीतकर्मी प्रेमध्वज प्रधान, गायक राजु लामासहितका व्यक्तित्वले उक्त एल्बम विमोचन गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
३० वर्षीया सन्ध्या हालै भारतको मुंगेरबाट एउटा भोजपुरी म्युजिक भिडियोमा दुईवटा गीतमा अभिनय गरेर फर्किएकी छिन् । भोजपुरी चलचित्र ‘किस्मत’ को एउटा आइटम गीतमा आकर्षक नृत्य गरेकी सन्ध्याले अर्को भोजपुरी चलचित्र ‘जब प्यार किया तो डरना क्या’ मा एचआईभीविरुद्ध जनचेतना फैलाउने अभिनय गरेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
योगगरु, आश्विन २६, २०७४
–घरमा होस् वा हाम्रो वरिपरि सजिलै पाइने केही चिज यस्ता छन् जसले ग्याँस तथा कब्जियतको समस्या सहजै ठीक पार्छन् । किसमिसमा प्रशस्त फाइबर (रेशा) पाइन्छ । एक मुठी किसमिस बेलुका पानीमा भिजाएर बिहान खालीपेटमा पानीसहित खाँदा कब्जियत ठीक हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्